July 1, 2021 - Khitalin Media
July 1, 2021 by Khitalin Media
စနေသားသမီးများ၏ စိတ်နေစိတ်ထား စနေသားသမီးများဟာအချစ်ကြီးတယ်။ သံယောဇဉ်ကြီးတယ်။ ချစ်သူဖေါက်ပြန်ရင်တောင်ခွင့်လွတ်နိုင်တတ်တယ်။ အပြောကောင်းတယ်။သဘောကောင်းတယ်။သဝန်တိုတတ်တယ်။ သူများထက်ပိုပြီး သဝန်တိုတတ်တယ်။ ကိုယ်ကတော့မစဘူး။ ကိုယ့်ကိုစလာရင်ပါပါသွားတတ်ပါတယ်။ လက်သာရင်လိုက်တဲ့ကလေးလိုပဲ။ ပိုဂရုစိုက်တဲ့သူနောက်ပါပါသွားတတ်ကြတာစနေသားသမီးပါပဲ။ စနေနဲ့ ကြိုက်ရင်တော့ ပိုဂရုစိုက်နိုင်အောင်သာ ကြိုးစားပေတော့ ။ နောက်တစ်ခု က စနေသားသမီးက ကြာရင် ငြီးငွေ့သွားတတ်ကြတယ် ။စနေသားသမီး နဲ့ တစ်နှစ်ကျော် ၂ နှစ်လောက် သမီးရည်းစားဖြစ်ပြီးရင် ယူချင်စိတ် လျော့သွားတတ်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ စနေသားသမီး နဲ့ ကြိုက်ရင် တစ်နှစ်အတွင်း ယူဖို့သာလုပ် နို့မို့ဆို မယူဖြစ်ပဲ ဇတ်မြောဖြစ်သွားတတ်ပါ တယ်။ စနေသား သမီးများ သတိုးသား ဖြစ်စေ၊ သတိုးသမီး ဖြစ်စေ စိတ်စေတနာကောင်း၊ စိတ်ရင်းကောင်း၊ ပင်ကိုယ် ဗီဇာ ကောင်းတတ်သည်။စနေတွေက အရာရာကို စိတ်အေး လက်အေးဖြင့် ဝေဖန် … Read more
အကျင့်ဆိုးလေးတွေ ရှိပေမယ့် စိတ်ရင်း ကောင်းတဲ့ အငယ်ဆုံးလေးတွေအကြောင်း…
အငယ်ဆုံးတွေဆိုတာ မိသားစုထဲမှာ ဆိုးချင်တိုင်းဆိုး လို့ရတက်တဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးတွေတော့ ရှိတယ် ဒါမဲ့ စိတ်ရင်းကောင်း ထားတက်ကြသလို အချစ်ရေးမှာလည်း သူ့ချစ်သူအပေါ် အချစ်သန်ပြီး မမူးပဲ ရစ်တက်တဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူလေးတွေလေ သူတို့ကို ချစ်ရင် အချစ်ကြီးလွန်းလို့ အစစအရာရာ အမြဲတမ်း ဂရုစိုက်မူတွေ အပြည့်ခံရတက်ကြတယ် သူလေးတွေပါ မဟုတ်မခံ ဆိုပေမဲ့ အရာရာကို မတွေးတောပဲ တဇွတ်ထိုး နိုင်တက်ကြတယ် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာတော့ တခုခု ဖြစ်လာရင် လက်မြန်ခြေမြန်တက်ကြသူတွေပါ မိသားစုအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး သူငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာတော့ အရမ်းကို ကောင်းတတ်ကြတယ် အိမ်မှာ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ချင်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဆိုရင်တော့ ကူညီဖို့ အမြဲတမ်း အစဉ်သင့် ဖြစ်နေသလို ဘာပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရ မညီးညူပဲ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်ထားလေးရှိတယ် ထပ်ပြောပါမယ် အငယ်ဆုံးလေးတွေဆိုတာ ဆိုးချင်နွဲ့ချင်ပေမယ့် … Read more
ခွေးတောက်ရွက်ငှက်ပျောသီးပြုတ် ဆီးကြိတ်ရောဂါအတွက်ဆေးနည်းကောင်း ဒီဆေးနည်းကိုကျေးဇူးတော်ရှင် မုံလယ်ဆရာတော်ကြီးတပြည့်ကိုတိုးလေးမှ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်မြင့် မှကျွန်တော်ထပ်ဆင့်သိရခြင်း ပါခင်ဗျာ ငှက်ပြောသီးဖီးကြမ်းတစ်လုံးကို အခွံပေါ်မှ အပေါက်ဖောက်ပါ ခွေးတောက်ရွက် ၇ ရွက်ပတ်ထုတ်ပြီး သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ပြုတ်ပါ အခွံခွါပြီးပြုတ်ပြီးငှက်ပျောသီးစားပါ အရည်ကိုလည်းသောက်ပါ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆီးသွားပြီးသော်လည်း ထပ်သွားချင်နေတာ ဆီးတော်တော်နဲ့မထွက်တာ ဆီးအိမ်မှာအောင့်နေတာ ဆီးနဲတာ စတဲ့စတာတွေသက်သာပြီး ကောင်းသွားလို့ အခုအဘအတွက်ပြုတ်ပေးရင်း မိတ်ဆွေတို့တိုက်ဆိုင်သူများရှိရင်ပေါ့ခင်ဗျာ အဘဦးဆန်းဝေကိုနှာခေါင်းပိုက်ထည့်ထားရ လို့ပြုတ်ရည်ကိုဘဲထည့်ပေးပြီးတဲ့အခါ ဆီးသွားရတာအချိန်ပိုခြားသွားပြီး ဆီးများများထွက်ပြီး ဆီးသွားရတာလွယ်သွားလို့ ထပ်ပြုတ်ပါဦးတဲ့ဗျာ ငြုပ်သီးစားပြီးဆီးအောင့်လေ့ရှိတဲ့ ဇနီးကလည်းဝမ်းသာအားရဖုန်းဆက်လာတယ် ကျန်နေတဲ့ငှက်ပြောသီးဂွေးတောက်ရွက်ပြုတ် တစ်လုံးစားလိုက်တော့ သုံးညဆက်တိုက်ဆီးသုံးကြိမ် ထသွားရပြီး အခုဆီးအောင့်နေတာပျောက်သွားသတဲ့ ခင်ဗျာ ဆီးဆေးကဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်ပါမှရောင်းချခွင့်ရှိတာမို့ ဒီနည်းကိုသာသုံးကြပါလို့ မိတ်ဆွေတို့ လွတ်လပ်စွာရှယ်ကြပါခင်ဗျာ ကုသိုလ်ပြုပါတယ်ခင်ဗျာ᠌᠌᠌ Zawgyi ေခြးေတာက္ရြက္ငွက္ေပ်ာသီးျပဳတ္ ဆီးႀကိတ္ေရာဂါအတြက္ေဆးနည္းေကာင္း ဒီေဆးနည္းကိုေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မုံလယ္ဆရာေတာ္ႀကီးတျပည့္ကိုတိုးေလးမွ ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ မွကၽြန္ေတာ္ထပ္ဆင့္သိရျခင္း ပါခင္ဗ်ာ ငွက္ေျပာသီးဖီးၾကမ္းတစ္လုံးကို … Read more
လူပိန္ခ်င္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ ဗိုက္ေခါက္အဆီ၊ ခါးဆီ၊ ေက်ာဆီလို အဆီပိုေတြပဲ က်ခ်င္တယ္ ဆိုသူမ်ားအတြက္ ေဆးနည္းေကာင္း…
အခ်ိန္မကုန္ လြယ္ကူသက္သာတဲ့ နည္းလမ္း ျဖစ္ေပမယ့္ နည္းလမ္းမွန္မွန္နဲ႔ေတာ့ ဇြဲရွိရွိ လုပ္ရပါမယ္။ ပါဝင္ပစၥည္း မ်ားကေတာ့…သံပုရာသီး တစ္လုံး ဂ်င္း လက္ တစ္ဆစ္ခန႔္ နဲ႔ ပ်ားရည္ ၂ ဇြန္းခန႔္ပထမဆုံး သံပုရာသီး နဲ႔ဂ်င္းလက္ တစ္ဆစ္ကို အခြံမခြါပဲ ေရစင္စင္ ေဆးပါၿပီးလၽွင္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို အကြင္းလိုက္ ပါးပါးေလး လွီးေပးပါ။ ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္စာ အဖုံးပါေသာ ေႂကြ သို႔ဖန္ခြက္ တစ္ခြက္ထဲသို႔ထည့္ၿပီး ပ်ားရည္ ထမင္းစားဇြန္း ၂ ဇြန္းထည့္ပါၿပီးရင္ ေရေႏြးဆူဆူ (လက္ဖက္ေျခာက္မပါ ရိုးရိုးေရေႏြး) ေလာင္းထည့္ၿပီး အဖုံးအုပ္ထားေပးပါ။ နာရီဝက္ခန႔္ေနလၽွင္ ေရေႏြးေႏြးေလး အေနအထားမွာ ဇြန္းျဖင့္ ေမႊေပးၿပီး တစ္ခြက္လုံးေသာက္ပါ။ အဖတ္ေတြ ကို လႊင့္ပစ္ရပါမယ္။ သတိထားရမွာကေတာ့ ညမအိပ္ခင္ အစားအေသာက္ အကုန္ … Read more
July 1, 2021 July 1, 2021 by Khitalin Media
သင့္ရဲ႕ တစ္ေန႔တာကံေကာင္းဖို႔အတြက္ မိုးလင္းတာနဲ႔ျပဳ လုပ္ရမယ့္ ဘုရားရွိခိုးနည္း ဘုရားရွိခိုး တာ ဘုရား ဂုဏ္ေတာ္ ပြားတာေမတၱာပို႔တာ ထြက္ေလဝင္ေလ စူးစိုက္ၿပီးမွငါးမိနစ္ဆယ္မိနစ္ တရားထိုင္တာဟာက်န္းမာေရးလဲရစိတ္ခြန္အားလဲေကာင္းစိ တ္ႀကံခိုင္ေရး လဲတိုးတယ္။ကိုယ္ခႏၶာ ခြန္အားတိုးတက္ ကိုယ္ခႏၶာ ႀကံခိုင္ေရး လဲတိုးတက္အကုန္လုံးအေကာင္းေတြခ်ည္းပါပဲ။ ဘုရားရွိခိုး ပူေဇာ္ရေသာအက်ိဳး ရွစ္ပါး။ (၁) သြားေလရာရာေရာက္ေလရာအရပ္ ၁၀မ်က္ႏွာတို႔၌ အပူေဇာ္အခ်ီးေျမႇာက္ကိုခံရျခင္း။(၂) သြက္သြက္လက္လက္ႏွင့္ထက္ျမတ္ေသာဉာဏ္ပညာ ကိုရရွိျခင္း။ (၃) ကိုယ့္အလိုလိုက္ၿပီးကိုယ့္အႀကိဳက္ကိုသာလုပ္ကိုင္ေပးၾကေသာအေႁခြအရံပရိသတ္ႏွင့္ျပည့္စုံရျခင္း။ (၄) မေရ မတြက္ႏိုင္ေသာ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း။(၅) ဘဝတိုင္း ဘဝတိုင္း အဆင္း႐ုပ္ရည္လွပျခင္း။ (၆)ကိုယ္လွ စိတ္လွ အတြင္းအျပင္ လွပ သည့္ အတြက္ အမ်ား ၏ႏွစ္သက္ျခင္း ကို ခံယူရျခင္း။(၇)မိတ္ေဆြအ ေပါင္းအသင္းတို႔၏ခ်စ္ခင္႐ိုေသေလးစားမႈခိုင္ၿမဲျခင္း။ (၈) ေကာင္းျမတ္ေသာ သီတင္းေက်ာ္ေစာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း။ ဤ၈ပါးေသာ … Read more
1.July.2021 မှ 7.July.2021 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း
1.July.2021 မှ 7.July.2021 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ အဖြစ်အပျက်အတိုင်း ၊ကိစ္စရပ်တိုင်း ဝေခွဲရခက်အောင် နှစ်မျိုးနှစ်ခွကြုံနေရတတ်သည်။ မိမိကိုယ်တိုင် တွေဝေဒွိဟဖြစ်နေရ တတ်သည်။ လောဘနောက်မလိုက်ဘဲ မှန်ကန်သည်လမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ လိုသည်။ အကောင်း အဆိုး ဒွန်တွဲနေတဲ့ကာလပါပဲ။ ကောင်းမလိုလိုနဲ့ ဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းထားတာကြံစည်ထားတာတွေ ပျက်လွယ် ပါတယ်။ ငွေမမြဲဖြစ်မယ်။ ငွေကုန်လွယ်မယ်။ အမွေကိစ္စ၊မြေကိစ္စ တွေဖြေရှင်းရလိမ့်မယ်။ ထပ်ချဲ့ထား သော အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေမနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။ အလုပ်များသလောက် အကျိုးအမြတ်နည်းလိမ့်မယ်။ ခရီး ဝေးသွားဖို့ကိစ္စများကြုံလာရနိုင်သည်။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ခြင်းမျိုးရှောင်ပါ။ မိမိလျှောက်မဲ့လမ်းတားဆီးမဲ့သူ နှောက် ယှက် မဲ့သူတွေ ကြုံရလိမ့်မယ်။ပညာရှာနေသူများမိမိလိုချင်သောပညာများရပါလိမ့်မည်။ သားသမီးကြောင့် စိတ် ချမ်း မြေ့ ပျော်ရွှင်ရလိမ့်မည်။ အချစ်ရေးကံကောင်းပေမဲ့ ချစ်ရသူ၊မိမိတန်ဖိုးထားရသူတွေအတွက် သောကရောက် ရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးတော့ ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ကာလပါ။ အစာမကြေခြင်း ၊အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၊ဗိုက်နာခြင်းမျိုး … Read more
ေခြၽးေပါက္က်ယ္လို႔ စိတ္ညစ္ေနပါသလား။ လုံးဝမညစ္ပါနဲ႔။ အခုေျပာမယ့္နည္းက ေခြၽးေပါက္က်ယ္သူေတြကို အေကာင္းဆုံး ျပဳျပင္ေပးမယ့္နည္းတခု ျဖစ္လို႔ပါ။ ၾကက္ဥအကာကို သုံး႐ုံပါပဲ။ ေျပာစရာတခုရွိတာက နည္းနည္းလက္ဝင္တာပါ။ ၾကက္ဥအကာကို ခရင္မ္ပုံစံျဖစ္တဲ့အထိ အဆက္မျပတ္ေတာ့ ေခါက္ေပးရပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြက ၾကက္ဥအကာ – (၁) လုံး သၾကား – ထမင္းစားဇြန္း (၁) ဇြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁။ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ၾကက္ဥတလုံးကို ေဖာက္ၿပီး အကာကို ပန္းကန္လုံးတခုထဲထည့္ပါ။ အဝါႏွစ္ လုံးဝမပါေစရ။(အဝါႏွစ္ပါရင္ ဆက္ လုပ္လို႔မရေတာ့ပါဘူး) ၂။ ပန္းကန္ထဲကို သၾကား ထမင္းစားဇြန္း (၁)ဇြန္း ထပ္ထည့္ပါ။ ၾကက္ဥအကာနဲ႔ သၾကားကို ေရာေမႊၿပီး ခေလာက္ပါ။ ၃။ ေမႊတဲ့အခါ ခေလာက္တံတခုခုသုံးရပါမယ္။ ၾကက္ဥအကာကို အရည္ကေန ခရင္မ္ပုံစံျဖစ္တဲ့အထိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေခါက္ရမယ္။ … Read more
အကယ်ဒမီ(၇)ဆုရှင် မင်းသားကြီး ဦးညွန့်ဝင်း ကွယ်လွန်သွား ပြီလို့သိရှိရ…
အကယ္ဒမီ(၇)ဆုရွင္ မင္းသားႀကီး ဦးၫြန႔္ဝင္း ကြယ္လြန္သြား ၿပီလို႔သိရွိရ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီမ်ားရွင္ ၫြန႔္ဝင္းကို အဖ အလကၤာေက်ာ္စြာ ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္၊ အမိ ေဒၚသိန္းၫြန႔္တို႔က ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ သထုံၿမိဳ႕၊ ဇြဲကလာ႐ြာ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ၇ ဦးအနက္ အႀကီးဆုံးသား ျဖစ္သည္။ ကေလးဘဝ၌ မႏၲေလးအမ်ိဳးသားေက်ာင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္စိန႔္ဖရန႔္စ္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္သားအ႐ြယ္မွ အသက္ ၂၀ အ႐ြယ္အထိ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဒါဂ်ီလင္တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၆ လခန႔္အၾကာတြင္ ေရဒီယိုပညာ သင္ယူရန္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္ တြင္ ၁ … Read more
က်န္းမာလွပတဲ့ ဆံေကသာ နဲ႔ စိုျပည္တဲ့အသားအရည္ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ဆန္ေဆးေရကို သုံးရေအာင္…..
ဆန်ဆေးရေဟာ သဘာဝအတိုင်းဆံကေသာတွေကိုလှပသန်စွမ်းစေတဲ့အပြင် အသားအရည် ကိုလည်းချောမွတ်ဖြူဝင်းစေပါတယ်။ဆန်မှာ ဗီတာမင်ဘီ၊ဗီတာမင်စီ၊ဗီတာမင်အီးနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့အက်စစ်ဓာတ်၈မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ လွယ်ကူပြီးငွေကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာတဲ့ဆန်ဆေးရေကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။ ပထမတစ်နည်းကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းဆန်ကိုဆေးပြီးထမင်းအိုးတည်ပါ။ရေမခမ်းခင်မှာ ခဏချပြီးရေစစ်နဲ့ခွက်အသန့်တစ်လုံးထဲကိုထည့်ပါ။ ပြီးရင် ဆန်ဆေးရေထည့်ထားတဲ့ခွက်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၁ပတ်ခန့်ထားပါ။ တစ်ပတ်ပြည့်သွားတဲ့အခါ ဆန်ဆေးရေစားပွဲတင်ဇွန်း၂ဇွန်းနဲ့ရေတစ်ခွက်ရောပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်နည်းကတော့ ဆန်ကိုရေသန့်သန့်နဲ့ဆေးပါ။ပြီးရင်နာရီဝက်ထားပါ။ နာရီဝက်ပြည့်သွားရင်ဆန်ခါနဲ့ခွက်အသစ်တစ်လုံးထဲ စစ်ထည့်ပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၄ရက်လောက်ထားပေးပါ။သုံးခါနီးရင်မွှေပြီးနည်းနည်းချင်းစီသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆန်ဆေးရေကိုနေ့တိုင်းအသုံးပြုပေးနိုင်ပြီးသဘာ၀ အတိုင်းမျက်နှာနဲ့ဆံပင်ကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းမျက်နှာမသစ်ခင်ဆန်ဆေးရေနဲ့သစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နေ့တိုင်းပုံမှန်သစ်ပေးမယ်ဆိုရင် ချွေးပေါက်ကျဉ်းပြီးအစက်အပြောက်ကင်းတဲ့မျက်နှာလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ ခေါင်းမလျှော်ခင် ဆန်ဆေးရေနဲ့အရင်လောင်းပေးပြီး ၁၀မိနစ်လောက်ထားပါ။ပြီးမှ ခေါင်းလျှော်ရည် နဲ့ သန့်စင်ပေးပါ။ တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါပုံမှန်လုပ်ပေးရင်ဗောက်ပျောက်ပြီးနူးညံ့တဲ့ဆံကေသာကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။ ဆန္ေဆးေရဟာ သဘာဝအတိုင္းဆံေကသာေတြကိုလွပသန္စြမ္းေစတဲ့အျပင္ အသားအရည္ ကိုလည္းေခ်ာမြတ္ျဖဴဝင္းေစပါတယ္။ဆန္မွာ ဗီတာမင္ဘီ၊ဗီတာမင္စီ၊ဗီတာမင္အီးနဲ႔က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့အက္စစ္ဓာတ္၈မ်ိဳးပါဝင္ပါတယ္။ လြယ္ကူၿပီးေငြကုန္ေၾကးက်လည္း သက္သာတဲ့ဆန္ေဆးေရကိုနည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ပထမတစ္နည္းကေတာ့ ပုံမွန္အတိုင္းဆန္ကိုေဆးၿပီးထမင္းအိုးတည္ပါ။ေရမခမ္းခင္မွာ ခဏခ်ၿပီးေရစစ္နဲ႔ခြက္အသန႔္တစ္လုံးထဲကိုထည့္ပါ။ ၿပီးရင္ ဆန္ေဆးေရထည့္ထားတဲ့ခြက္ကို ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ၁ပတ္ခန႔္ထားပါ။ တစ္ပတ္ျပည့္သြားတဲ့အခါ ဆန္ေဆးေရစားပြဲတင္ဇြန္း၂ဇြန္းနဲ႔ေရတစ္ခြက္ေရာၿပီးအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္နည္းကေတာ့ ဆန္ကိုေရသန႔္သန႔္နဲ႔ေဆးပါ။ၿပီးရင္နာရီဝက္ထားပါ။ နာရီဝက္ျပည့္သြားရင္ဆန္ခါနဲ႔ခြက္အသစ္တစ္လုံးထဲ … Read more
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ 2021 ခုနှစ်အတွက် တစ်နှစ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ 2021 ခုနှစ်အတွက် တစ်နှစ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း ခုနစ်ရက် သားသမီးများအတွက် တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ ! ဒီနှစ်တွေမှာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲလာမလဲ ? ကံကြမ္မာရေးရာ အဖြာဖြာကို သိရှိနိုင်ဖို့ အခုပဲ တစ်နှစ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်းမှာ ဖတ်ရှုလိုက်ပါ။ Sunday ချစ်သူမရှိသေးသူများ ချစ်သူတွေ့မည်။ အရိုးရောဂါများ ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ Monday အချစ်ရေး ကံကောင်းပါသည်။ ရေမြေခြားမှ ချစ်သူရရှိမည်။ Tuesday ချစ်သူချင်း နားလည်မှု လွဲတတ်သည်။ အာရုံကြော အစာအိမ် အသဲရောဂါ ဂရုစိုက်ပါ။ Wednestday အချစ်ရေးတွင် ကြားလူ အနှောင့်အယှက်ရှိပီး အရှက်ရစရာများ ကြုံနိုင်သည်။ အူလမ်းကြောင်း နှလုံးနှင့်ပတ်သတ်သော ရောဂါများ သတိထားပါ။ Thursday အချစ်ရေး အထူးကံကောင်းသော … Read more